Shilalekha » आज बजारमा यो कम्पनीको शेयरमा उच्च माग ? आज बजारमा यो कम्पनीको शेयरमा उच्च माग ? – Shilalekha
आज बजारमा यो कम्पनीको शेयरमा उच्च माग ?
२ चैत्र २०७७, सोमबार १८:१५
काठमाडौं । लामो समयदेखि करेक्सनको यात्रामा अधि बढिरहको नेप्सेमा सोमबार चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनीको शेयरमा उच्च माग देखिएको छ ।आज सोमबार नेप्सेमा कारोबारमा आएका कम्पनीहरुमध्येमा चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनी शेयरको उच्च माग देखिएको हो ।
नेप्सेमा चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत भएपश्चात आज चैत २ गते सोमबारसम्म आईपुग्दा बढोत्तरी कै यात्रामा बढिरहेको छ ।
कम्पनीले माघ २३ गते, शुक्रबार एक करोड ५३ लाख ४० हजार ९ सय १० कित्ता धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम नेप्सेमा कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको थियो । सूचीकृत पश्चात कम्पनीको शेयर निरन्तर बढिरहेको छ ।